ianao eto: Home endrika Treatments Light make-up ho maitso maso
Mpandresy tsirairay maneho fihetseham maso maitso mirehareha tsy fahita firy ny toy izany Hue, fa koa ny voajanahary playfulness fijery, ary koa ny hazavana be pitsiny zava-miafina. Green maso dia heverina ho tena ihany no ho an'ny isan-manao-ny mpanakanto sy ny stylist, satria ny make-up ho azy ireo dia fomba lehibe mba manandrana. na dia fahazavana make-up ho maitso maso Tsy tafiditra amin'izany ny fampiasana ny loko iray ihany no faritra, ny aloka, ary koa ny mahatonga izany azo atao ny mampihatra ny teknika isan-karazany ny make-up.
Ny maitso-maso tsara tarehy sy mijery amin'ny voajanahary lehibe mahaforona isan'andro, ary ny obvorožitel'nym ​​smoki-ajz. Na dia izany aza, mba hametraka ny fanamafisana ny toetry ny toetra ireo dia tsy maintsy ho marina sy ny fahatsapana ny antonony. Ihany amin'ity tranga ity dia mety hanamafy ny voajanahary tsara tarehy ny tsy fahita firy maso, ary noforonina tamin-kafetsena afeno ny fahadisoana efa misy tapaka sy endrika ny maso, raha toa ka misy.
Easy isan'andro makiazy
Tsy isaky ny firaisana ara-nofo ara-drariny eo amin'ny piadiana misy fotoana ampy ho an'ny, mba ho afaka ny handany azy amin'ny mahavariana make-up. Na izany aza, Aza kivy, izany foana dia tonga noho ny tsy fahampian'ny fotoana mba hanampy, fara fahakeliny, maneho fihetseham sy mirindra fahazavana make-up ho maitso maso. koa, maitso maso hatsarana dia tsy maintsy mifototra amin'ny sehatra makiazy mazava loko. Natural andro make-up ho an'ny maso miloko maitso dia azo ampiharina ihany ho an'ny 10-20 minitra. noho izany:
Eo anatrehan 'kely kilema eo amin'ny hoditra, dia nanitsy ny mpananatra amin'ny toerana fomba (mpananatra dia ampiharina ihany amin'ny faritra ny hoditra takaitra).
Ary Korzh tsy maintsy rakotra manify sosona ny fototra na ny vovoka.
Taorian'ny famoronana dia feo hoditra dia tokony Niainga ny cheekbones.
Ny hodi-maso ambony Voasaron'ny aloka maivana alokaloka. Safidiny no nanolorana azy ho hanome ny oliva, volontsôkôlà na beige feo.
Ny ivelany vazan-maso dia antitranterina miaraka amin'ny fanampian'ny aloka, feo maro ireo bebe nifototra. Izany andinin-tsoratra manan-danja indrindra ho an'ny vehivavy miaraka amin'ny vonin'ny amygdala, mbamin'ny miendrika maso endrika.
Miaraka amin'ny fanampian'ny eyeliner matoatoa va ny sokola nanao tsipika manify manaraka tsipika tamin'ny karavasy.
Mba hamita ny endriky ny fatiny ampiasaina maizina fotsy na mainty Tint.
Mba hanome ny tolo-kevitra hita vatana ny fahazavana ho-up zava-manitra, ianao dia afaka manandrana azy aloka loko mamirapiratra.
Rehefa mangatsiaka mampiasa loko ny voajanahary ho an'ny maitso maso makiazy dia aleo smoky lilac matoatoa, fuchsia mamokatra ilay, ary tototry mavokely sy volafotsy feo. Raha ny ankapobeny loko rafitra dia mafana, dia tsara indrindra ny mampihatra, kremovыe, paiso sy ny fanosotra matoatoa.
Makeup Secrets for maitso maso